Pikantsary LED piksel kely China Manufacturer
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:P4 Fampivoarana ivelany ivelany,Fampirantiana feno loko anatiny,Birao fampisehoana feno loko miloko feno
Home > Products > UHD Led Screen > UHD Led Display-PJ > Pikantsary LED piksel kely
Model No.: PJ-2
Noho izany, ao ambadiky ny tsena mampitombo dia mihamalalaka hatrany ny fampitomboana ny fifaninanana indostria. Mba hitadiavana fahasamihafana, ny orinasam-pifandraisan'izy ireo dia nanolotra paikady fampivoarana samihafa, ka nampiroborobo ny fampivoarana isan-karazany ny tsena LED-pitch mini.
Inona no ilain'ny efijery fampisehoana LED piksel kely
Fampitana fahitana. Ny efijery Piva LED dia eo ambanin'ny fanandramana fakan-tsary avo lenta, ny fanamafisana ny loko sy ny halalin'ny loko. Ka ny fanamafisana dia avo kokoa.
Priva LED PJ andian-dahatsoratra misy hazavana HD mitarika dia manana lanja maivana kokoa ny kabinetra. Fialofana sy fanarenana ny aoriana. Ary miaraka amin'ny kojakoja modular, tena tsara ho an'ny Maintenance izany. PJ series LED display dia manana endri-javatra sy fiasa.
1, maivana, milanja 7 kg, apetraka mora foana; ultra-manify, vatan'ny kabinetra dia vita amin'ny aluminiana maty, tanjaka avo, avo toerana avo, avo marim-pototra izay tsy mora fanovana mandritra ny fitaterana sy miasa;
Module amin'ny Rafitra Fahazavana HD anatiny
P1.875 Indoor HD Wall Video
P1.875 loko feno anatiny no nitarika fisehoana
P1.875 HD LED mampiseho rindrina anatiny
P1.875 Fampivoarana LED an'ny anatiny anatiny
P4 Fampivoarana ivelany ivelany
Fampirantiana feno loko anatiny
Birao fampisehoana feno loko miloko feno
P5 Fampivoarana ivelany ivelany
P16 Fampivoarana ivelany ivelany
Fampivoarana ivelany ivelany smd
P25 Fampisehoana ivelany ivelany